: at 10/16/2009 08:53:00 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်များမကြာမီက သတင်းအဟောင်းတွေ ပြန်လှန်ဖတ်ရင်း အံ့သြစရာလေး သွားတွေ့ လိုက်လို့စိတ်ဝင်စားမိတယ် ။ သတိထား သင့်တယ် ထင်လို့ရှာဖွေ ဖတ်ထားတာလေးတွေ ကို နားလည်သလို ဘာသာပြန်ရေးပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဒီထိုင်ဝမ်မှာ အမျိုးသမီး တဦး ဟာ အိမ်မှာနေတုံး မျက်စိ ၊ နား ။နှာခေါင်း ၊ပါးစပ် ရှိသမျှ အပေါက် တွေမှ သွေးများရုတ်တရက် ယိုထွကိ လာပြီး အသက်ဆုံး ရှုံးသွားတယ် ။ ဆေးရုံရောက်ပြီး အသက်ကယ်ပေမဲ့လည်း မရလိုက်ပါဘူး ။ ဒီတော့ police case ပေါ့လေ ။ ဆရာဝန်တွေက သက်ဆိုင်ရာ မှုခင်းဆရာဝန်တွေ ၊ ရဲတွေ အကြောင်းကြားပြီး ဒီ လူသေမှုကို စစ်ဆေးကြရတော့တာပေါ့ ။အဆိပ်သင့်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံ တာလား ။ သူများက လုပ်ကြံတာလား ဆိုတာကို စစ်ဆေးကြရတယ်လေ ။
ဒ်ီအမျိုးသမီးရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ ..သူမ ဟာ အဲဒီနေ့ ညစာ ကို seafood ပုစွန်၊ ဂဏန်းတွေနဲ့ စားခဲ့တယိ။ သူ့ မိသားစုတွေလည်း ဒီဟင်းကိုပဲ အတူတူ စားခဲ့ ကြတာပါ ။ ဒါပေမဲ့ တခြားသူတွေကတော့ ဘာမှ နေမကောင်းခြင်း မဖြစ်ခဲ့ဘူး ။ ဒါဆို ဘာကြောင့် သူ့ တယောက်ထဲ ဖြစ်ရတာလဲ လို့ စဉ်းစားစရာပါဘဲ ။
သူ့ ရဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို ပြန်မေးကြည့်လိုက်တော့ သူဟာ မသေခင် အချိန်ကာလ ကြာရှည်စွာ ကတည်းက ဗီတာမင် စီ ဓါတ်ပါတဲ့အားဆေးပြားတွေကို အလွန်အမင်းမှီဝဲနေကြဖြစ်တယ်တဲ့ ၊ ဒါနဲ့ဘဲ သေသူရဲ့အစာအိမ်ထဲမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ သူ နောက်ဆုံးစားခဲ့တဲ့ အစာဟောင်းတွေကို မှူခင်းသိပ္ပံ ဆရာတွေက ဓါတ်ခွဲ စမ်းသပ်ကြည့် ကြပါတယိ ။ ထွက်လာတဲ့ အဖြေ ကတော့ အာဆင်းနစ် အဆိပ်သင့် ခြင်း ပါတဲ့ ။
ဘာကြောင့် ဒီလို အဆိပ်သင့်ရတာလဲ ၊
( အလွန်လှချင်သူများ ။ ဗီတာမင် စီ အများအပြားသောက်သူများ ။ seafood ကြိုက်သူများ မှတ်သားဖွယ်ရာ ပါ )
မိန်းကလေး များစွာ တို့ဟာ အဲဒီ ဗီတာမင်စီ အားဆေးတွေကို အသားအရေလှအောင် ၊ပိန်အောင်.စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ နဲ့ နေ့့စဉ်သောက်သုံးတတ်ကြပါတယ် ။ seafood လည်း ဒီလိုပါဘဲ ။ အရသာရှိတဲ့အစားအစာ ဆိုတော့ အလာဂျီ ရှိတဲ့ သူတွေကလွဲရင် လူတော်တော်များများက ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ် ။ အထူးသဖြင့်တရုပ်လူမျိုးများပါ ။ ဘယ်လောက်ပဲ ဈေးကြီးပစေ ၊ စားကြတာပါဘဲ ။
ဗီတာမင် စီဆိုတာက ရေထဲ ပျော်ဝင်လွယ်တဲ့water soluble တမျိုးပါ ။ဒါကြောင့် သူ့ကို ဘယ်လောက် များများ စားသုံးပေမဲ့ ကျောက်ကပ် ပုံမှန် ရှိနေတဲ့လူကောင်းတဦးမှာ ပိုလျှံနေတဲ့ဒီ ဗီတာမင်စီ ပမာဏကို ဆီးထဲမှ နေပြီး စွန့် ထုတ်ပေးလို့လူအတွက် အန္တရာယ် မဖြစ်စေပါဘူး ။လတ်ဆပ်တဲ့Seafood ပုစွန် ၊ ဂဏန်းတို့ ဟာလဲ သူ့ ချည်း သက်သက်ဆို ဘာမှ အန္တရာယ် မပေးပါဘူး ( အလာဂျီ ရှိသူများက လွဲရင်ပေါ့ )
ဒါပေမဲ့ ပြသနာ က ခုမှ စတာပါ ။ များသောအားဖြင့်ဆိုင်တွေမှာ စားကြသောက်ကြရင် အအေးလေးနဲ့ ၊ အရက်လေးနဲ့တွဲ ပြီး စားကြတယ်လေ ။ စားရင်းပြောရင်းနဲ့ အာခြောက် ရင်းနဲ့အအေးတွေလည်း အတော်လေး ဝင်သွား ကြလေ့ရှိတယ် ။ အဲဒီ အအေးမှာ sunkist , orange တို့ လို အချဉ်ဓါတ် ပါတဲ့juice တွေက အအီပြေစေတာမို့တွဲသောက်တတ်ကြတယ် ။ အဲဒီတော့ seafood တွေရယ် ၊ ဗီတာမင်စီလွန်ကဲတဲ့ အအေးတွေရယ် တွဲ မိ သွား ခဲ့ရင်တော့ အာဆင်းနစ် အဆိပ်သင့် တတ်ကြတယ်တဲ့ ။
အမေရိကန်နိုင်ငံ လ ချီကာဂို မြို့ တက္ကသိုလ် တခုမှ သုတေသနပညာရှင်များတွေ့ ရှိချက် အရ ..ပုစွန် ၊ ဂဏန်းတွေရဲ့ပါးလွှာတဲ့အခွံလေးတွေမှာ ပိုတက်စီယမ် အာဆင်း နစ်ဒြပ်ပေါင်းတွေ ပါရှိ သတဲ့။
As2 05 လို့ခေါ်တဲ့ arsenic oxide ( Potassium arsenic anhydride ) ဟာ သူ့ ဟာသူ အခွံ ပါ်း လွှာလေးထဲ မှာ ရှိနေတာ လူကို ဘာမှ အဆိပ် မဖြစ်စေပါဘူး။ဒါပေမဲ့ သူက ဗီတာမင်စီဓါတ် အလွန်အကျွံနဲ့ တွေ့ ထိသွားတဲ့ အခါကျတော့ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့ (As2 O3) ခေါ် arsenic trioxide ADB arsenic anhydride , အပါအဝင် potassium toxic arsenic အဖြစ် ဓါတ်ပြောင်းလဲ သွားရတယ် တဲ့ ။
အဲဒီ အာဆင်းနစ် အဆိပ်သင့်ရင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ ။
သူဟာ သွေးကြောအမျှင်ငယ်လေးတွေကို မလှုပ်ရှားအောင် ပျက်စီးစေတယ် ။ အသည်းရဲ့ လုပ်ငန်းတခု ဖြစ်တဲ့
သွေးခဲခြင်း လုပ်ငန်းကို ပျက်စီးစေတယ် ၊အသည်းထဲမှာ သိုလှောင်ထားတဲ့ အဆီ ဓါတ်ကိုပုတ်ပျက်စေတယ်။ ဒါကြောင့် အသည်း ၊ နှလုံး ၊ကျောက်ကပ် ၊ အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ အပေါ်ယံ အမှေးလွှာ တွေမှာရှိတဲ့ သွေးကြော ငယ်လေးတွေမှာ သွေးတွေ အိုင်ထွန်းစေပြီး ရှိသမျှ အပေါက် ၊ မျက်စိ ။နား ။ နှာခေါင်း ။ပါးစပ် ။ စအို စတဲ့ နေရာများမှ သွေးယိုစီး ပြီး အသက် ဆုံးရှုံးစေတတ် ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲဒါကြောင့် အသက်ကို ဥာဏ်စောင့် ဆိုသလို ပုစွန် ဂဏန်းကြိုက်ကြသူများ အထူးဂရူပြုကြပါ ။ စားရင်းနဲ့ အအီပြေအောင် အအေးလေး သောက်တဲ့အခါ ဗီတာမင် စီဓါတ်တွေလွန်ကဲတဲ့ အအေးမျိုး ရှောင်ကြ ရှားကြ ပါ ရန် တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ။
မှတ်ချက် ။arsenic trioxide (As2O3) ဟာ အဆိပ်လို့ဆိုပေမဲ့ ဆေးပညာ အရ သူဟာ အသုံးဝင်တဲ့နေရာတွေ ရှီနေပါသေးတယ် ။ တန်ရင်ဆေး လွန်ရင်ဘေး ဆိုသလို တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင် တွေ က သူ့ ကို ကင်ဆာရောဂါ ကုသရာမှာ အသုံးပြု ကြပါတယ် ။
သွေးကင်ဆာ ရောဂါ တချို့lymphoma and myeloma ။ Acute Promyelotic Leukemia(APL) စတဲ့ရောဂါတွေကို ကုသလို့ ရပါတယ် ။
ကုသရေး အကြောင်းတွေ စိတ်ဝင်စားလို့ ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီနေရာလေးမှာ ဆက်လက် လေ့လာနိုင်ပါတယ် ။
ဗဟုသုတ ရစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ် ။ အားလုံး ကျန်းမာ ရွှင်လန်းကြပါစေ ။
ဟို အပေါ်က သတင်းလေးကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ဖတ်လို့ ရပါတယ် ။
:kiki : at 10/16/2009 08:53:00 PM
Anonymous said... | Friday, October 16, 2009 9:10:00 PM
တစ်ချို့ က ပုစွန်ကို သံပုရာသီး ညှစ်စားတယ်။ အဲဒါမျိုးကျတော့ကော ?
ရွှေရတုမှတ်တမ်း said... | Friday, October 16, 2009 11:33:00 PM
အခု..ကိုကြီးကျောက် လုပ်နေတဲ့ super market မှာ ကို..snow crab..စားလို့..customer တယောက်..နေမကောင်းဖြစ်တယ်..ဆိုပြီး..ပြဿနာလာလုပ်နေလေရဲ့....
သုခုမလေဒီ said... | Friday, October 16, 2009 11:52:00 PM
Sea food ကြိုက်လို့ နေရာလာဦးတာ နံပါတ်၃ ဖြစ်သွား တယ်။
နှင်းနဲ့မာယာ said... | Friday, October 16, 2009 11:54:00 PM
ပုဇွန်ဆို အသေရရ အရှင်ရရ
အဲ လိမ္မော်ရည် အချိုရည်လဲ ကြိုက်မှကြိုက်...
Yu Ya said... | Saturday, October 17, 2009 12:02:00 AM
Seafood သိပ်မကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော်အတွက်တော့ ဖွားကိရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ဗဟုသုတ အဖြစ်ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ.. အဟီး။ ဆရာမကြီးလာလုပ်သွားလို့... Seafood မကြိုက်ဘူးလို့ လာညာပြောသွားတယ်.။
အမှန်က အရမ်းနဲ့ကြိုက်တာဗျ.။ ဖွားကိကို သွားမပြောနဲ့နော်။ တော်ကြာ ကျွန်တော်ကို ဆရာမကြီးလာလုပ်နေမှာဆိုးလို့..he..he.
ဝက်ဝံလေး said... | Saturday, October 17, 2009 12:02:00 AM
အယ် သတိထားစရာပဲ မကိရေ sea food လဲကြိုက်တယ် ဟိဟိ လိမ္မော်ရည်လဲ ကြိုက် ဟားဟားးးးးးးးးးးး
သုခုမလေဒီ said... | Saturday, October 17, 2009 12:02:00 AM
အဲ နှင်းနဲ့ မာယာကလည်းမြန်လိုက်တာနော်။ ခြေသွက်လက်သွက်ပဲထင်တယ်း))
Sea food စားရင်း sunkist လည်းသောက်ခဲ့တယ်လေ။ အမနဲ့ ပဲဟာ။ ခုထိတော့ အဆင်းလည်းမနစ်သေးဘူး အတက်လည်းမနစ်သေးဘူးး))
သုခုမလေဒီ said... | Saturday, October 17, 2009 12:04:00 AM
ဟမ် .. ဘယ်လိုလုပ် ယုယနဲ့ ဝက်တို့ က ရောက်လာပြန်တုန်း။ တယ်သွက်ကြတာကိုးးးး။ ခြေသွက် လက်သွက်တွေ ဘလော့မှာအတော်များပါလား
Anonymous said... | Saturday, October 17, 2009 1:39:00 AM
sea food ရော အချဉ်ဓါတ်ပါတာတွေပါ ကြိုက်တတ်လွန်းသူမို့ နောင်သတိထားရအောင် ဖတ်ရတဲ့အတွက် ကိကိ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
thawzin said... | Saturday, October 17, 2009 2:34:00 AM
ဒီမှာတော့ မချက်တတ်တာနဲ့ကို seafood ဆိုတာတွေ မြင်ဖူးပြီး မစားနိုင်ပါကြောင်း၊ အအေးလေးနဲ့ ဆိုတော့ ဖြစ်ဖို့ပိုများတာပေါ့ဗျာ။ အနောက်နိုင်ငံတွေ အများစုက အအေးတို့ ဘီယာတို့ဆိုတာ ရေလိုသောက်နေကြတာ။ သြော် ဗီတာမင်စီက အသားအရည် တကယ်လှတယ်ပေါ့ မှတ်သား သွားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း
Unknown said... | Saturday, October 17, 2009 4:27:00 AM
မှတ်သားစရာလေးတွေ စုစည်းတင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါ...
မကိကိက ဇာတ်သမားလားမသိဘူး သူလာရင်မှတ်သားစရာလေးတွေ အမြဲပါတယ်...
သူပြန်ရင်တော့ ကျန်ခဲ့တာပေါ့... :P :P မှတ်သားစရာတွေနော်... :P :P
ကိုလူထွေး said... | Saturday, October 17, 2009 4:38:00 AM
အဲဒါတွေမသိဘူး... ပုစွန်လုံးနှိုက်ရင် လက်ကိုကိုက်လွှတ်တတ်တာတော့ သိတယ်...
မငုံ said... | Saturday, October 17, 2009 6:18:00 AM
အဲ..seafood စားရင်း အအေးသောက်တတ်တယ်။ :( ကြောက်သွားပြီ။ တွဲစားတော့ဘူး။
Anonymous said... | Saturday, October 17, 2009 6:46:00 AM
သြော် ဒွတ်ခတော့တွေ့ ပြီထင်ပါရဲ့
၀လို့ ပိန်လာအောင် ပင်လယ်စာတွေပဲ စားတော့မယ်
Angel Shaper said... | Saturday, October 17, 2009 8:04:00 AM
မီးကြီး ဆီးဖရု အဲလေ..Sea Food ကြိုက်ဘူးရယ်။
ဘကြီးသုတ အဲလေ ဗဟုသုတ အဖြစ်သာ ဖတ်သွား မှတ်သွားပါတယ်။ ဟဲဟဲ
May Thu Khine said... | Saturday, October 17, 2009 8:26:00 AM
အီးးးး တေပြီ..... seafood ဆို အကုန်ကြိုက်တယ်..... ချဉ်ချဉ်ချိုချို အ၇ည်တွေလဲ ကြိုက်တယ်...
မမသီရိ said... | Saturday, October 17, 2009 10:05:00 AM
မှတ်သားဖွယ်ပါ ကိကီ ရေ
ဒါနဲ့.. ဗိုက်တာမင် စီ အလွန်အကျွံ ဆိုတာ ဘယ်ပမဏကိုပြောတာပါလဲ
မမ မှတ်ထားဖူးတာက ဗိုက်တာမင်စီက ခန္ဒာကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ထက်ပို တယ်ဆိုရင် သူ့ အလိုလို ပျက်စီးသွားတယ် လို့ပဲ သိထားတာလေ (ကိကီရေးတဲ့ထဲလဲ ပါ ပါတယ်)
ပြီးတော့ ဆေး အတော်များများ က ဗိုက်တာမင် စီ 200 mg (or) 300 mg လောက်နဲ့ တွဲ သောက်ရင် ပိုအစွမ်းထက်တယ် လို့ လဲ မှတ်ဖူးတယ်
လူတယောက် အတွက် တနေ့တာ
ဖြည့်စွက်လိုအပ်ချက် က ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ
500 mg (OR) ?????
အမြဲ မဟုတ်ပေမဲ့ မမ လဲ ဗိုက်တာမင် စီ သောက်သူ တယောက်မို့ ပါ
ခြေလှမ်းသစ် said... | Saturday, October 17, 2009 10:24:00 AM
အင်း သတိထားရမယ်ဗျို့  အမရေ ကျနော် စီးဖူးဒ်ဆို အင်မတန်ကြိုက်တာဗျ .. လေ့လာသွားတာပေါ့နော် ... မှတ်သားသွားပါသေးတယ် ...
rose of sharon said... | Saturday, October 17, 2009 11:16:00 AM
အောင်မယ်လေး...seafood စားရမှာလန့်တာ... သူရေးလိုက်ရင်ဒါမျိုးများတယ်.... ဟွန့်... ပြောချင်ဘူး... ဗဟုသုတရသလောက် ကြောက်အောင်လဲ လုပ်သေးတယ်...
Khyl said... | Saturday, October 17, 2009 11:20:00 AM
စီးဖုစာပြီး ရှောစစ်စတား ဖြစ်ဘူးတယ်..... တခါတုန်းက ငွေဆောင်မှာပေါ့အေ....
kiki said... | Saturday, October 17, 2009 12:26:00 PM
--> မမသီရိ ရေ .. လူတယောက်တွက် တနေ့ လိုအပ်ချက်နဲ့အများဆုံး ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ ပမာဏ သတ်မှတ်ချက်တွေ က တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံ မတူကြလို့စံအဖြစ်ထားတဲ့ United States vitamin C recommendations ကို ရှာရေးပေးလိုက်ပါတယ်...
Recommended Dietary Allowance (adult male) 90 mg per day ။
Recommended Dietary Allowance (adult female) 75 mg per day။
Tolerable Upper Intake Level (adult male) 2,000 mg per day။
Tolerable Upper Intake Level (adult female) 2,000 mg per day။ တဲ့
အဲ့ ဒါအပြင် . Vitamin C megadosage ဆိုတာလဲရှိသေးတယ် .. တကယ်vitamin C ဓါတ် ချို့ တဲ့နေတဲ့ ရောဂါသည်တွေ သောက်ဖို့ နဲ့ထိုးဖို့ဆိုတော့ အတော်များပါတယ် ။ နာရီပိုင်း အလိုက် . ကိုယ်အလေးချိန်အလိုက် သုံးရတာတွေလေ..
Anti-oxidant effect ရှိတယ်ဆိုလို့အမျိုးသမီးတွေ က (လှချင်သူများ) သောက်လေ့ရှိကြတယ်း) ။
ပြီးတော့ .. flu(common cold) မှာ ၈% က ပိုမြန်မြန်ပျောက်လွယ်တယ်တဲ့။ gout အစရှိတဲ့ ရောဂါတွေမှာ လဲ .သူ နဲ့ တွဲသောက်ကြတယ် ။
အဲ့ဒီ နေရာတွေ မှာ သွားဖတ်ကြည့်နော်..ရေးရတာ ညောင်းလို့.. ဟိဟိ ။
စိမ်း... said... | Saturday, October 17, 2009 1:33:00 PM
အောင်မလေး ကံကောင်းလို့ မဂန့်တယ်... ပုစွန်နဲ့ Ice lemon Tea အင်း ... ဘုရား ဘုရား ဘုန်းကြီးကံကြီးပေလို့... :)
Anonymous said... | Saturday, October 17, 2009 3:54:00 PM
ဒါနဲ့ မသိလို့မေးဦးမယ် သံပရာသီးကရော ဘာလဲဟင်.. ဗီတာမင်စီလား... အဲဒါနဲ့တွဲမစားနဲ့ဆိုရင်တော့ ပင်လယ်စာက စားကောင်းမှာတောင် မဟုတ်တော့ဘူးဗျ။ ရေဘဝဲတို့ ကင်းမွန်တို့ ၊ပြည်ကြိးငါးတို့ ခရုတို့ အဲဒါတွေက သံပရာသီးလေး ရွှဲရွှဲညှစ်ပြီး ဝါးမှမိုက်တာဗျ
moemoestar said... | Saturday, October 17, 2009 8:11:00 PM
sea food ကြိုက်တယ်...ဒုက္ခပါဘဲ...
သားကြီး said... | Sunday, October 18, 2009 1:01:00 AM
အဲလိုဆင်ခြင်ဖွယ်ရာတွေဖေါ်ပြပေးလို့ကျေးဇူးပါ တန်ဆေးလွန်ဘေးပေါ့ဗျာ ဘယ်ဟာမှလွန်လွန်ကျွံကျွံမကောင်းဘူး
မူးသွားရင်တော့မသိဘူး တားတားအကုန်ချားတယ် ဟိဟိ
သားကြီး said... | Sunday, October 18, 2009 1:03:00 AM
ကျနော်မောင်သားကြီးကတော့ ခုလောလောဆည် ဂွိ..ဂွိ...ဂွိ...:P
amk said... | Sunday, October 18, 2009 8:27:00 AM
ကျေဇူးပါအန်တီkiki ရေ. Seafoodsနဲ့Vit C juic မတည့် လို့beer(or) wine နဲ့တွဲသောက်သုံးသင့် တယ်လို့မှတ်ယူသွားပါတယ်
Anonymous said... | Thursday, October 29, 2009 11:16:00 PM
according to SNOPES.com ..asite to shows whether something is hoax or not... that this email is also one of those HOAX outside...
This isahoax. It'sabrief message with no facts to back it up and refers only to an incident allegedly having happened in Taiwan. There is no record that TruthOrFiction.com could find of any concerns over combining vitamin-C and shrimp.
Peace~~~ Too many hoax out there